Kylian Mbappe Oo Jawaab Adag Siiyay Lionel Messi Iyo Kabta Dahabka Ah Ee Yurub Oo Xiiso Yeelatay. - Gool24.Net
Tartanka kabta dahabka ah ee gool dhalinta Yurub ayaa xiiso cusub yeelatay kadib kulamadii La Liga iyo Ligue 1 ee maanta la ciyaaray.
Da’yarka kooxda PSG ee Kylian Mbappe ayaa ka soo laabtay ganaaxii uu ku maqnaa wuxuuna jawaab siiyay Lionel Messi oo laba gool ka dhaliyay kulankii Eibar.
Haddii aanu Lionel Messi laba gool ka dhalin lahayn kulankii Eibar, waxa uu hadda halis wayn ugu jiri lahaa in uu kabta dahabka ah ee gool dhalinta Yurub uu u waayo Kylian Mbappe oo wali hal kulan oo kale ciyaari doona.
Kylian Mbappe ayaa laba gool ka dhaliyay kulankii ay kooxdiisa PSG ku xasuuqday Dijon FCO wuxuuna yeeshay 32 gool oo horyalka France ah si uu sare ugu soo qaado hamigiisa kabta dahabka ah ee Golden Shoe.
SIDOO KALE AKHRISO: HORDHAC: Wolves vs Man United - Red Devils Oo Marti Ku Ah Garoon Laba Jeer Lagu Soo Garaacay Xilli Ciyaareedkii Hore, Faah-Faahinta Kulanka & Shaxaha Macquulka Ah.
Iyada oo horyaalka La Liga la soo gaba gabeeyay ayuu Lionel Messi labadii gool ee uu Eibar ka dhaliyay waxa uu ku yeeshay 36 gool waana laba gool oo si wayn uga caawin kara in uu Mbappe kaga guulaysto kabta dahabka ah ee Yurub.
Mbappe ayaa kulankii Dijon FCO waxa uu labadiisa gool dhaliyay daqiiqadihii 36 iyo 56 aad wuxuuna hadda kulanka Stade Reims uu u baahan yahay in uu dhaliyo afar gool si uu ugu yaraan kabta dahabka ah ula qaybsan karo Lionel Messi.
Lionel Messi ayaa 36 gool oo horyaalka La Liga ah ku helay 72 dhibcood halka Kylian Mbappe uu 32 gool ku haysto 64 dhibcood wuxuuna hadda Kylian Mbappe u dagaalami doonaa in uu kulanka ugu danbeeya goolal badan dhaliyo.
Lionel Messi ayaa haddaba ku guulaystay abaal marinta gool dhalinta La Liga ee Pichichi oo uu markii lixaad hantay wuxuuna dariiqa u saaran yahay in uu kabta dahabka ah ee Yurub markii lixaad si rekoodh ah ugu guulaysto.
Tartanka kabta dahabka ah ee Messi iyo Mabppe
Haddii ay dhacdo in Kylian Mbappe uu afar gool ka dhaliyo kulanka horyaalka France ugu danbeeya waxa uu kabta dahabka ah si wada jir ah ugula guulaysan karaa Lionel Messi.
Cristaino Ronaldo iyo Luis Suarez ayaa sanadkii 2014 kii ahaa labadii ciyaartoy ee ugu danbeeyay ee hal xili ciyaareed kuwada guulaystay kabta dahabka ah.
Laakiin haddii uu Kylian Mbappe ku fashilmo in uu afar gool ka dhaliyo kulanka ay PSG jimcaha la ciyaari doonto kooxda Stade Reims waxa uu markaas Messi si kali ah ugu guulaysan doonaa Golden Shoe-ga.